Ichegharia B2B ahia ahia? Nke a bụ otu esi ahọrọ mkpọsa mmeri | Martech Zone
Ọ na-ama jijiji mana ọ bụ eziokwu: ụlọ ọrụ azụmaahịa bidoro itinye n'ọrụ na Q1 2020 agabigala oge Q2 na-agagharị, nsogbu COVID-19 gbawara na ọdịda akụ na ụba nke ọrịa na-efe efe. Nsonaazụ azụmahịa gụnyere ọtụtụ iri nde ndị ọ metụtara ihe omume kagburu. Ọbụna dịka ụfọdụ steeti na-anwale ịmaliteghachi, ọ nweghị onye maara n'ezie mgbe ọrụ azụmaahịa dịka okporo ụzọ na nzukọ ụlọ ọrụ ga-amalite.
Ndị ahịa aghaghị ichegharị maka atụmatụ ha maka ije ozi n’ihi mgbanwe ndị a. Ọtụtụ ngalaba ahịa nwere yigharịrị mkpọsa ma belata mmefu ego. Mana ọbụlagodi ndị otu na-ere ahịa na-aga n'ihu na steam zuru ezu na-agbanwe usoro ha iji gosipụta ọnọdụ azụmaahịa ọhụrụ ma melite ROI. N'akụkụ B2B karịsịa, asọmpi na-arịwanye elu ga-eme ka ọ dị oke mkpa iji hụ na dollar ọ bụla sitere na mmefu ego na-eweta ego - na ndị ahịa nwere ike igosipụta ya.
Somefọdụ ndị na-ere ahịa B2B emezigharịla usoro ha site na ịgbanwe ego ewepụtara na mbụ maka mmemme, ugbu a na ọwa dijitalụ. Nke ahụ nwere ike ịdị irè, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha agbanweela profaịlụ nke ndị ahịa dị mma maka akaụntụ maka ọnọdụ akụ na ụba ọhụrụ. Ilebara ihe ndi ozo anya dika inyocha usoro ihe omimi iji gosiputa ihe ndi agha choro bu ezi uche, dika inyocha uzo di iche iche nke ozi, udiri ọdịnaya na uzo iji chọpụta ihe kachasi nma.
Ozugbo ekwusara ihe ndị bụ isi, enwere ụzọ dị iche iche ị nwere ike inyocha data na ọkwa dị larịị iji chọpụta ma ọ bụrụ na mmemme azụmaahịa dijitalụ B2B gị na-arụ ọrụ nke ọma wee chọpụta nke na-ebute nsonaazụ kacha mma na ntinye ego. Usoro ọnụọgụ ahịa ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ ga-agwa gị ụdị mkpọsa na-eweta clicks na echiche peeji, nke bara uru. Mana iji banye n'ime mmiri miri emi, ị ga-achọ data na-enye nghọta na mmetụta mkpọsa na ego na ahịa.
Na-ele anya na akụkọ ihe mere eme chọrọ ọgbọ mkpọsa data bụ ezigbo ebe na-amalite. Nwere ike nyochaa nkewa dị n'etiti mgbasa ozi dijitalụ na nke na-abụghị dijitalụ wee chọpụta otu mpempe ọ bụla si achụ ahịa. Nke ahụ ga-achọ ụdịdị mkpọsa mgbasa ozi. “Dị “mmetụ mbụ” nke kredit na-eduga na nnabata izizi nke ụlọ ọrụ ahụ nwere na onye na-achọ ịre ahịa ga-egosiputa na mkpọsa dijitalụ na-ekere òkè dị ukwuu n'ịmepụta mmasị ndị ahịa ọhụrụ.
O nwekwara ike inye ìhè iji chọpụta nke mkpọsa metụtara ọtụtụ ahịa. Chaatị dị n'okpuru na-egosi etu mkpọsa dijitalụ na nke dijitalụ si metụta ahịa n'otu ihe atụ:
Illingbanye n'ime data akụkọ ihe mere eme dị ka nke a nwere ike inye nghọta dị ịrịba ama ka ị na-agbanwe usoro ịzụ ahịa gị iji mesie mgbasa ozi dijitalụ. Ọ nwere ike inyere gị aka ịhọrọ ndị mmeri mgbe ị na-atụle ọtụtụ nhọrọ dị iche iche.
Usoro ọsọ ọsọ bụ ihe ọzọ dị mkpa n'ịhọrọ mmeri mkpọsa. Locgba ọsọ na-akọwa oge (na ụbọchị) ọ na-ewe iji gbanwee ndu na ire ere. Zọ kachasị mma bụ iji tụọ ọsọ ọsọ na ọkwa ọ bụla nke ahịa na ire ere. Mgbe ị chọrọ ị nweta ego ọsọ ọsọ, ị ga-achọ ijide n'aka na ị nwere ike ịhụ ma kpochapụ nsogbu ọ bụla na usoro ahụ. Vetụle ọsọ ọsọ na ọkwa ọ bụla na-enyekwa nghọta maka mgbanwe dị mma ị mere.
Chaatị dị n'okpuru na-egosi ihe atụ nke ọsọ ọsọ nke ndị ahịa ruru eru (MQLs) ka ha na-agafe na olulu na 2019 na nkeji iri na ise nke 2020:
Dị ka data dị na ihe atụ a na-egosi, otu ndị ahịa na-emeziwanye nsonaazụ Q1 2020 ha ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere Q1 2019. Nghọta ahụ na-enye ndị otu ihe ọmụma bara uru banyere ọsọ ọsọ nke mmemme ndị etinyere n'oge oge abụọ ahụ. Ndị na-ere ahịa nwere ike iji nghọta ahụ mee ọsọ ọsọ oge iji nweta ego na-aga n'ihu.
Ọ dịghị onye maara kpọmkwem ihe ọdịnihu ga-eweta ka azụmahịa na-emepe ọzọ na mpaghara ma ọrụ akụ na ụba na-eburu. Ndị na-ere ahịa B2B enweelarị ịhazigharị usoro mkpọsa ha, ọ ga-abụrịrị na ha ga-agbanye ya ọzọ ka ihe ọhụrụ pụta. Mana n'oge a na-ejighị n'aka, ikike ịhọrọ ndị nwere mmeri ga-adị mkpa karịa mgbe ọ bụla. Iji ikike data na ike nyocha, ị nwere ike ime nke ahụ.
Tags: b2b ahịa dijitalụCOVID-19ahia ruru erummkwije ozigboụlọ nkwonkwo ahịa
MVRK: Mwepụta nke 3D Omume Omume